Njengoba ehlelwe yi-abaklami, Lada Priora hatchback wasigcina Umklamo ukucaciseleka weJiyomethri imigca ezinikeza imoto umuzwa kalula futhi swiftness. Ochwepheshe wakwazi ukwenza izibani kanye taillights nenhle ngaphezulu, evulekile isondo nemengamo ukunikeza imoto umuzwa nokuqina. Phakathi kwezinye izinto, ovikelekile ukuma hatchback ukunikeza ngesivinini ukusebenza okuhle sokunciphisa umoya lapho zindiza, kwakhiwe ibhalansi ezinhle ephakamisa amandla futhi niggardly.
Kuyaziwa ukuthi ngenkathi usebenza kuma-sedan Priora, "AvtoVAZ" Iyakwazi izingxenye ezintsha ecishe ibe yizinkulungwane 2. Lada Priora hatchback inama ngomunye izakhi 230 yasekuqaleni futhi ISIZINDA, kodwa "isifo" ezinye ejwayelekile, ukubonakala ekuqaleni, ukuqeda, kubonakala, akazange aphumelele ukubuyisana nomkakhe. Ikakhulu, wathenjiswa ukuphothula idrayivu isigwedlo. Inguqulo yangaphambilini wasebenza kahle ngokwanele, futhi, njengoba kuboniswa ukuhlolwa, hhayi Lada Priora hatchback iphunyukile isiphetho efanayo edabukisayo. Songa ezingemuva esihlalweni backrest ungakwazi, cishe, kuphela indoda ubekezela kakhulu nge Imizimba omuhle, abesifazane, le nkinga ngeke nanini benze. Isiqu sawo ivulekile esusela elingaphakathi akude - inkinobho on the key. waba 30 amalitha esingaphansi sedan, kodwa nesihlalo eligoqiwe ku injini umthamo Lada Priora hatchback sifana esiteshini enqoleni agcwele. Lasekuqaleni iminyango ingaphakathi nge control amandla iwindi izinkinobho, emaphaketheni kanye Indwangu ifaka kufanelana ngokuphelele zingene design avumelanayo endlwaneni eyakhiwe ingaphakathi. Isiqu ukhululekile, okhiye abathambile futhi izinkinobho kukhona icwecwe, akudingeki yokwelula. I gumbi sezulu emnandi, isekelwa, ngasendleleni, usebenzisa Ukushisa ukupholisa uhlelo ne standard emoyeni yokuhlanza zokuhlunga. Priora hatchback - imoto ukhululekile yakhelwe ngokucophelela ekwazi ukumelana namandla omoya bese ukhetha izici ezifanele.
Ngokusemthethweni, imoto itholakala amazinga amathathu ngombala: "Standard", "Norma" futhi Lada Priora hatchback suite. Ukuze yakamuva etholakalayo air conditioning, ABS kanye airbag, futhi, kakhulu, umfuziselo kuwufanele $ 100 ezibizayo ngaphezu sedan efanayo. Loluhlelo sigameko kuphinde kukhululwe isethi ephelele "Deluxe" nge Park Distance Control, inzwa imvula, izibani othomathikhi bese eliphezulu audio.
A amazwi ambalwa mayelana nokuvikeleka Lada Priora hatchback. Izibuyekezo Ochwepheshe abaningi ukuphahlazeka ukuhlola okuye kwabonisa ukuthi imoto ukulungele ukunikeza ezingeni kudingekile eyisivikelo umshayeli nabagibeli. Lubhekele ukuphepha amabhande umshini ukuphepha, ama-airbag ezinhlangothini, kwagcizelela ohlangothini komzila, Sills nophahla. Isicabha ngombala design inikeza ifaka ekhethekile Damping, ohlangothini umthelela ukunqandwa.
Shestiklapanny 1.6 litre engine ivumela imoto ukukhombisa ukusebenza okuhle ashukumisayo. Abaklami baye basebenzisa indlela crank nge pistons engasindi, okwenza kube lula ukunciphisa kakhulu ukulahlekelwa mechanical, futhi ngaleyo ndlela ukuqinisekisa elilungile injini ukusebenza. Lapho ushayela Priora hatchback ukhululekile futhi kumnandi, kanye nesikhathi sokuhamba ondiza.
I-gearbox ye-Hydromechanical: isimiso sokusebenza nedivayisi
I "irobhothi" kuhlukile "umshini", uyini umehluko? Yikuphi okungcono - ibhokisi "irobhothi" noma "umshini"?
Ukubuyekezwa kwe-Nokia 225 umakhalekhukhwini Dual Sim: ukubuyekezwa, Ukucaciswa, izithombe
Kanjani ukufakazela kokushaywa? Kanjani ukufakazela kokushaywa?
Izakhiwo kanye nezimiso zakwa-carbohydrate. carbohydrate umsebenzi
Ubudala angamarizevu ebuthweni Russian. Iyini yobudala angamarizevu eRussia?